AES 'Plugfest' အောင်မြင်မှုသည် Digigram ၏ AES67 / RAVENNA အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုအတည်ပြုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AES '' Plugfest '' သက်တမ်းရှိ Digigram ရဲ့ AES67 / RAVENNA အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာအောင်မြင်မှု
AES '' Plugfest '' သက်တမ်းရှိ Digigram ရဲ့ AES67 / RAVENNA အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာအောင်မြင်မှု
အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်ခြင်းပွဲ AES67 နျ Standard Interconnection စံချိန်စံညွှန်း-အခြေပြုသည့်ပစ္စည်းအတွက်ရီးရဲလ် Gain ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသရုပ်ပြ
MONTBONNOT, ပြင်သစ် - ဇန်နဝါရီ 27, 2015 - Digigram ယနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် 67 အတွက်မြူးနစ်အတွက် Institut မှာ EBU သားမွေး Rundfunktechnik (IRT) နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် AES အားဖြင့်ကျင်းပသည့် AES2014 အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်မှုအဖြစ်အပျက်ကိုပါဝင်ခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဤ "Plugfest" Digigram နှင့်အခြားရွေးချယ်ရန်ရောင်းချသူတစ်ဒါဇင်ကျော်ထုတ်ကုန်ကိုဖြတ်ပြီး AES67-2013 ၏ကွဲပြားခြားနားသောကလပ်စများအကြားအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်၏လွှမ်းမိုးသောအောင်မြင်မှု Digigram IP ကိုအသံ codec နှင့် sound ကတ်များ၎င်း၏အကွာအဝေးသို့ထည့်သွင်းထားပါတယ်သော AES67 စံနှင့် RAVENNA အကောင်အထည်ဖော်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏တန်ဖိုးအားဖြည့်။
အဆိုပါ AES67 စံဒီနေ့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဈေး၌ရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသော IP ကို-based အသံကွန်ရက်ထုတ်ကုန်များအကြားက high-performance ကို synchronous အသံ-over-IP ကို ​​streaming များအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနိုင်ပါတယ်။
"ဟုအဆိုပါ Plugfest စမ်းသပ်မှု၏အောင်မြင်မှုလက်တွေ့တန်ဖိုးနှင့် AES67 ဂတိနှင့်ထိုကဲ့သို့သော RAVENNA အဖြစ် AES67-သဟဇာတပွင့်လင်းနည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းများအတည်ပြု, ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ IQOYA ထုတ်ကုန်လိုင်းနှင့် sound card ကိုပူဇျောသက်ကာတွင်ဤနည်းပညာများအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် validates မသာ," က Nicolas ကပြောပါတယ် Sturmel, Ph.D ။ , Digigram မှာသုတေသန၏ဦးခေါင်း။ "အသစ်တစ်ခုကိုစံ၏မွေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အဓိကပြောင်းကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 2015 သို့ရှေ့ဆက်အဖြစ်ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ AES67 / RAVENNA-enabled ဖြေရှင်းချက်၏နောက်ထပ်လွှတ်ပေးအဖြစ်ကဤဖြေရှင်းချက်သူတို့ရဲ့ဖြန့်ကျက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကို enable ပြုလုပ်စံချိန်စံညွှန်းများ-based Workflows ထူထောင်အတွက်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုမျှော်လင့်ထား။ "
ရေဒီယိုအဆောက်အဦအတွက် IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုကျော်နိမ့်အောင်းနေချိန် synchronous အသံဖြန့်ဖြူးဆောင်ရွက်မှုတွေ, RAVENNA IP ကိုအသံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အသစ်များကိုအဆင့်ဆင့်နိုင်ပါတယ်။ Digigram 2010 အတွက် ALC NetworX နေဖြင့်ဖြန့်ချိသည့် RAVENNA လုပ်ငန်းစု၏ပထမအင်္ဂါတို့တွင်ကြီးနှင့်ကုမ္ပဏီ IBC67 ပြပွဲမှာအသံ-over-IP ကို ​​(AoIP) ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ၎င်း၏ IQOYA အကွာအဝေးမှ AES2014 / RAVENNA ဆက်သွယ်မှုများ၏ထို့အပြင်ကြေညာခဲ့သည်။ Digigram ရဲ့ IQOYA ဖြေရှင်းချက်ကိုသူတို့စတူဒီယိုအတွင်းအသံ IP ကိုပိုမိုသုံးစွဲခြင်းဆီသို့အသုံးပြုသူများသည် '' ရွှေ့ပြောင်းဖြေလျှော့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်စံများနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အိုင်တီပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏အသံအခြေခံအဆောက်အအုံများပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဒီဇိုင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့ကိုကူညီပေးပါတယ်။
မတ်လ 2014 အတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း, LX-IP ကို ​​RAVENNA PCIe sound card ကို Digigram ရဲ့ပထမဦးဆုံး RAVENNA-enabled ထုတ်ကုန်ကိုယ်စားပြုသည်။ IP ကို ​​packet ကိုတစ်ဦးလျှင်တဦးတည်းအော်ဒီယိုနမူနာဆင်း ultralow အောင်းနေချိန် featuring, မျိုးစုံ RAVENNA စီးနှင့်အပြည့်အဝ MADI interface ကိုထံမှ 256 RAVENNA I / O လိုင်းများမှတက်, ကတ်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုထဲမှာ High-density ကိုအသံထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်အလိုအလျောက် application များအတွက်စံပြဖြစ် ။ ဤကတ်ပြီးသား consoles စဖော်စပ်ထုတ်လွှင့်က၎င်း၏အသစ်က CPU ကို-based Infinity စီးရီး "ကို AES67 ဆက်သွယ်မှုကို enable Studer ကမွေးစားခဲ့သည်။
Digigram နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.digigram.com သို့မဟုတ် + 33476 52 47 47 မှာဖုန်းဖြင့်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဟာယုံကြည်စိတ်ချရသောဖမ်းမိ, ထုတ်လုပ်ခြင်း, နှင့် IP ကွန်ရက်များကျော်က high-quality audio ကနှင့်ဗီဒီယို၏ပေးပို့ enable ။ ၎င်း၏ဆန်းသစ် IP ကိုအသံ codec, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သံကိုကတ်များနှင့်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ software ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သတင်းထောက်များ, ထုတ်လွှင့်ခြင်း, အသံအင်ဂျင်နီယာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ Digigram ရဲ့ All-IP ကိုဗီဒီယိုကကုန်ပစ္စည်းလိုင်းထုတ်လွှင့်ဖို့အဆင့်မြင့်အလှူငွေနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်, IPTV, Web ကိုတီဗီ, နှင့် OTT အော်ပရေတာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းသော့ချက် Audio / Video နည်းပညာများနှင့် software ရောင်းချသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူမှ OEM ဖြေရှင်းချက်ကယ်တင်တတ်၏။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Digigram/Digigram-IQOYA_LINK_HD_Ravenna_AES67.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: IQOYA * LINK နှင့် * LINK / LE ပေး Audio-ကျော်-IP ကို ​​codec
AES67 audio အသံလွှင်း Digigram Institut သားမွေး Rundfunktechnik IRT Plugfest RAVENNA 2015-01-28
ယခင်: Dalet "Dalet အကယ်ဒမီ", နယူးအခမဲ့ပညာရေးပလက်ဖောင်းလွှတ်တင်
နောက်တစ်ခု: တိုက်ရိုက် BVE ထုတ်လွှင့်ပံ့ပိုးရန် Ravensbourne ကျောင်းသားများ